Tsika Kambani - Dongguan Taiyang Textile Chemicals Co, Ltd.
Core Maitiro: Kuita bhizinesi rakakura, kubatsira vashandi kuti vabudirire.
Chiono: Kuve iyo inonyanya kuremekedzwa kambani inoshanda mumakemikari epasi
Basa: Kuita kuti Chinese makemikari indasitiri iwedzere simba, rega kudenga kuve rakacheneruka uye rakachenesa mvura
Wedu Womweya Zvirinyore, vakazvitsaurira uye vanozvikurudzira.
Maonero Ese: Zvese zvinofanirwa kuenderana nehukuru hwedu hunhu.
Mitemo yekushanda pamwe chete: Wese munhu anofanirwa kuve nemhando imwechete, maonero uye tsika, anofanirwa kuve nemasimba makuru ekuuraya zvakare uye mativi ese anofanirwa kushanda seyuniti imwe, achifambira mberi akananga kune icho chimwe chinangwa.
Code yeCadre Mufambiro: Kubata moyo wechikwata, moyo wekambani, uye nemoyo wemutengi.
Mweya waCadre: Hapana marwadzo, hapana purofiti
Kuitwa kweCadre: Tsigiro yesarudzo dzekambani zvine simba; ita zvisarudzo zvekambani nekukurumidza
Sarudzo yeCadre: Resolute chinzvimbo, chakadzidziswa chako pachako, zvakanakira mibairo, sarudza iyo yakanyanya kunaka.
Uchenjeri hwekupona: Kuva munzira yakanaka ndiyo yega nzira yekuvapo nekusingaperi.
Mafungiro ehunhu: Rega kunyunyuta. Bata nekukurumidza. Ita mazano zviso zvakatarisana kunge murume munyoro, usatore shure kunge munhu akaipa.
Kuteerera: Vanozviisa pasi pavo vanoteerera vakuru vavo. Kana tsika yemapoka madiki uye kufarira kukakavadzana netsika uye kufarira kambani, vape mukana kufarirwa neboka uye vateerere tsika yakakura uye kufarira kwekambani.
Implementation: Zvingave zvakanaka kana zvakaipa, ita zvinofambirwa nekambani nekutsunga.
Kubatana: Pedza zvinhu zvapachokwadi sezvo yaive mabasa ako pachako uye tora mutoro wese kana zvinhu zvikaita zvisirizvo.
Basa: Kuvimbika. Inherit kambani vanogadzirisa 'ruzivo rwakanaka uye ruzivo pamusoro peichi chikonzero.
Democracy: Gadzirira mazano uye hurukuro usati waita sarudzo yekupedzisira uye kana yakanyorwa, ita zviripo.
Kutsungirira: Rangarira chiono chekambani paunenge uchinge wavhiringidzika, uye ramba uchifambira mberi, rangarira chiono chekambani kana mumwe munhu achibva, uye ramba uchienderera kumberi. Batanidzai kwakakomberedza mamaneja makuru anotora mutungamiri semusimboti, uye tsungirirai kusvika mukubudirira.
Tsigiro: Batsirai mumwe nemumwe uye mukure pamwe, kana munhu mumwe akawira kumashure, vamwe vese vanomukurudzira.
Kudzidza: Ramba uchidzidza; Mukati, dzidza kubva kune yakanyanya kambani vatinoshanda navo uye, vavarira kuva vakanaka, vekunze, chero bedzi vamwe vaine zvakanaka, isu tinofanirwa kudzidza kubva kwavari.
Kukura: Izvo zvinhu zvakanyanya kuomesa zvichaitirawo kusimba. Izvi zvinonyanya kuitika kune chibhakera makore 3-5, apo isu tinofanira kurwisa zvakanyanya.
Mufananidzo: Ratidza mufananidzo wakanaka weiye mushandi weindasitiri kune vamwe.
Kubudirira: Kana uchiwana kubudirira, usaite chinhu kuti chakakwana; Kana usingawane chimwe chinhu, tenda zvakadzama kuti isu takanaka sevamwe.
Mubayiro: Zvibvunze isu zvatakaitira kambani iyi tisati tataura nezve mubairo. Kuzvitsaurira kudiki kunoreva kuwana zvishoma. Kuzvitsaurira kwakakura kunoreva kuwana zvakawanda.
Kurongeka: Tungamira mberi mweya wekuzvipira.
Kuonga: Inzwa uchitenda neTY. Iva wakazvipira kuTY isu kana tave pano, uye usambofa wakatengesa TY kunyangwe tabva.
Pfungwa yevashandi: Position ndiyo yekutanga uye kugona ndiyo yechipiri.
Implementation uzivi: Sisitimu ndiyo yekutanga, vatungamiriri ndivo vechipiri.
Mutengi: Sangana nevatengi neruremekedzo; kutaurirana nevatengi zvakanaka; shandira vatengi nekufunga; kuparadzira rudo kwese kwese nekuda kwekuwedzera kukosha kwevatengi.
Anotengesa: Shandira pamwe kwenguva yakareba, mukure pamwe uye muve neanokunda-win hukama.
MaMamiriro ekunze: Shanda nesimba, rarama uchifara uye uve nemhuri inofara.